Robotrading वा मार्गदर्शन ट्रेडिंग - Blockchain समाचार
Robotrading साझेदारी किन्न वा बेच्न बोलपत्रहरू राख्दै लागि निर्देशन को एक सेट प्रयोग गरेर प्रक्रिया छ, पैसा, वा cryptocurrency. यो निर्देशन सेट विभिन्न बजार संकेतक आधारित छ, सहित मूल्य, समय, मात्रा, र अरूलाई. जब व्यापारीहरु थकित रही र स्वयं व्यापार गर्न समय छैन, तिनीहरूले robotrading जाने विचार. तर यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सीमा एकदम उच्च छ, विशेष गरी कुनै विशेष आर्थिक वा प्राविधिक शिक्षा छ जसले एक व्यक्ति को लागि.
robotrading गर्न संक्रमण र निःशुल्क समय बारे
यदि निजी निवेशक लाभ मा केंद्रित, मार्गदर्शन र स्वचालित व्यापार भिन्नता बुझ्नुहुन्छ, र केही कार्यक्रम कौशल छ, तिनीहरूले कम्तिमा स्वचालित रेल स्विच बारेमा विचार गर्नुपर्छ. प्रभावकारिता र काम को स्कोप वृद्धि गर्दै: मानिसहरू थप र राम्रो प्रदर्शन. व्यापार द्वारा स्वतः तपाईंलाई थप आदानप्रदान कवर गर्न सक्नुहुन्छ, थप उपकरण र रणनीति प्रयोग. तर यो तपाईं मार्गदर्शन व्यक्तिहरूलाई जस्तै स्वचालित सञ्चालन निगरानी गर्न आवश्यक छैन भनेर होइन. अनुगमन बारे मा भूल छैन, यसलाई आफ्नो आँखा खुला राख्न महत्त्वपूर्ण सधैं छ.
कुनै पनि व्यापार, मार्गदर्शन वा एल्गोरिथमिक कि, प्रक्रिया प्रयास र पूर्ण संलग्नता आवश्यक. तपाईं कमाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं व्यापार मा धेरै समय खर्च गर्न. आदर्श, तपाईं पूर्ण काम दिन हुनुपर्छ, तपाईं बस कोड लेख्न गर्दा र गर्न सक्छन् आराम जाने. को पाठ्यक्रम, एक ठाउँमा बस संलग्न गरिनेछ, तपाईं संसारभरिका यात्रा गर्न सक्षम हुनेछ, तर तपाईं अनलाइन सधैं भने मात्रै. तर यो दिन को लागि एक पाम रूखमुनि एक भ्कोलुड़गो मा झूट बारेमा निश्चित छ.
फिएट पैसा र cryptocurrency बारेमा
कार्यक्रम मामलामा, तपाईं व्यापार गर्दै छन् के बीच कुनै भिन्नता छ, फिएट पैसा वा cryptocurrency. मुख्य कुरा राम्रो मिस्त्री व्यापार प्रणाली सिर्जना गर्न छ. त्यहाँ पारंपरिक मुद्राहरू संग कि प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर एल्गोरिदम छन्, cryptocurrencies, वा स्टक साझेदारी. यसलाई प्रविष्टि लागि के उपकरण लागू गरिन्छ महत्त्वपूर्ण छैन. के कुरा गर्दछ अल्गोरिदम मा टैग: नियमहरूमा विशेष चयन उपकरण को व्यवहार वर्णन छ वा छैन. त्यसैले यहाँ प्रारम्भिक व्यापार विचार निरूपण र रणनीति को प्रश्न हो. कुनै पनि मामला मा, जब एउटा अल्गोरिदम विकास छ, एक विशेष व्यापार सम्पत्तिको व्यवहार खातामा लिएको छ.
लाभ बारेमा, जोखिम र मूर्ख गल्ती
मार्गदर्शन व्यापार भन्दा स्वचालित व्यापार को सबैभन्दा ठूलो फाइदा भावना को अभाव छ. मानिसहरू अक्सर भावना र भावना मा आधारित निर्णय र यसलाई सधैं परिणाम सकारात्मक प्रभाव छैन, विशेष गरी महत्वपूर्ण क्षणमा. तुलनामा, यस तर्कको बस कुनै पनि भावना वा उत्तेजना बिना यसको काम कार्य; यो आवेगशील निर्णय लिन गर्दैन र कडाई निर्दिष्ट रणनीति मा व्यापार. र तर्कको सुरु गरिएको छ भने, यस व्यापारी हस्तक्षेप गर्न सकिएन र केही परिवर्तन.
को पाठ्यक्रम, त्यहाँ जोखिम हो, र तिनीहरूले सामान्यतया बजार जोखिम हो. जब कुनै पनि अप्रत्याशित घटनाहरू र संकटहरूको बजार मा उत्पन्न अल्गोरिदम व्यापार विचार केही बिन्दुमा कमाउन रोक्न सक्छ. सबैभन्दा रोबोट संकेत पहिल्याउन सक्दैन. तपाईंले यी अवस्थामा ट्र्याक र समय मा आफ्नो रोबोट परिवर्तन वा तिनीहरूलाई असक्षम हुनेछ. एउटा सानो जोखिम विनिमय तपाईं असफल हुनेछ पनि छ.
यसबाहेक, प्रोग्रामर कहिलेकाहीं मुर्ख तर गम्भीर गल्ती गर्न सक्छ. एक सरल अल्गोरिदम लागत र मूल्य छ. को पाठ्यक्रम, आय बनाउन क्रममा, तपाईंको मूल्य तपाईंको लागत भन्दा उच्च हुनुपर्छ. तपाईंले तिनीहरूलाई भ्रममा भने, तपाईंको रोबोट unprofitable हुनेछ. अक्सर newbies यो समस्या सामना. फलस्वरूप, कुनै पनि मंच मा एक धेरै नै सरल गल्ती भारी घाटा जान्छ.
कुनै पनि विशिष्ट कौशल धेरै उपयोगी हुनेछ. कुनै पनि विशिष्ट कौशल भन्दै द्वारा, मुख्यतया गणित र तर्क को राम्रो ज्ञान अर्थ. यसलाई तपाईँले प्रारम्भिक चरणमा कुनै पनि बीजीय रूपान्तरणहरू आवश्यक छैन कसरी एक औपचारिक व्यापार नियम बरु गणित बारेमा भन्दा लेख्न स्पष्ट तर्क र समझ बारेमा थप छ. त्यहाँ कसरी व्यापार गर्न को भावना र घटनाहरू र कार्यहरू एक औपचारिक सेटमा व्यापार तर्क वर्णन गर्ने क्षमता बीच स्पष्ट भिन्नता छ. यो चरण मा, हामी गणितीय ज्ञान आवश्यक. पनि, कार्यक्रम कौशल र आधारभूत कार्यक्रम भाषाहरूको आदेश (उदाहरणका लागि, “ग”) अत्यावश्यक छन्.
कहिलेकाहीं तपाईं एक लाभदायक रणनीति संग आएको जस्तो देखिन्छ, तेजस्वी र काम व्यापार विचार. तपाईं कुनै पनि गणितीय मोडेलिंग कार्यक्रम मा यसलाई वजन, उदाहरण को रुपमा, Mathcad. त्यसपछि, तपाईं डाटा मा हेर्न, डाटा मोडेल डिजाइन, र आवश्यक गणना बनाउन. तेस पछि, तपाईंले सबै आयोगहरु र surcharges समावेश, र सबै ठीक काम गर्दछ. खैर, कुनैपनि हालतमा, बच्चा आफैलाई के, सबै भुक्तानी समावेश, अत्यावश्यक छ. तर त्यसपछि के तपाईं यो विचार देखि कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो विचार को प्राविधिक कार्यान्वयन बढी पैसा चाहिन्छ भन्ने महसुस.
कुनै बखत, एक निजी निवेशक एक भव्य व्यापार रोबोट गरे, नाम पान्डा. यसलाई उत्पन्न एउटा 8,000% लगभग कुनै प्रारम्भिक जोखिम तीन महिना को पाठ्यक्रम भन्दा फर्कन. पान्डा छलफल र धेरै hyped थियो, तर यो साँच्चै राम्रो काम. तर कुरा रोबोट मा प्रारम्भिक राजधानी यो पैसा गरे थियो 1 हजार, जबकि सम्पूर्ण प्राविधिक पूर्वाधार लागि मासिक समर्थन एक वरिपरि परियोजना लागत धान्न आवश्यक 10 हजार. यसरी, यसलाई सुरुमा एक unprofitable परियोजना थियो, किनभने यो पनि बिजुली लागि सबै लागत कवर सक्छ, शक्तिशाली सर्भर र कम्प्युटर परियोजना को लागि गणना पूरा विशेष गरी, एक रोबोट आय सधैं उच्च हो कि सम्झना गर्नुपर्छ, तर मर्मतका लागि पैसा निरंतर भुक्तानी गर्न छ. त्यसैले, यसलाई कसरी कमाउने मात्र गणना गर्न महत्त्वपूर्ण छ, तर पनि कमाउन गर्न खर्च गर्न तपाईं कति.
छिटो बारेमा पैसा
यो रोबोट अलग कन्फिगर गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट छ, यो व्यापार को मात्रा मा निर्भर गर्दछ, के leverages र ऋण गर्दा व्यापार प्रयोग गरिन्छ, तपाईं आफ्नो वा कसैको तर्फबाट पैसा लगानी कि, आदि. त्यहाँ nuances धेरै छन्. तर सामान्य मा, तपाईं मा दस वर्ष को लागि व्यापार द्वारा लगभग कुनै जोखिम संग सानो हरेक वर्ष द्वारा साना कमाउन सक्नुहुन्छ 10% प्रति वर्ष, वा तपाईंले एक वर्ष व्यापार गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ 100%.
उच्च क्षमता फिर्ती - तर तपाईं धोखा गर्न सक्षम हुने छैन भन्ने शेयर बजार मा व्यवस्था छ, महान् सम्भावित जोखिम. यो रूपमा आपूर्ति र माग को नियम बलियो छ. त्यसैले, यदि तपाईं ठूलो पैसा गन्न, ठूलो घाटा लागि तयार हुन. यो नियम बचा गर्न सकिँदैन र यसलाई लगानीको मा फिर्ता आउँदा खातामा लग्नु गर्नुपर्छ (रय) वा एल्गोरिथमिक व्यापार लाभकारी.
newbies लागि मञ्चहरूमा बारेमा
त्यहाँ छ कि कुनै ट्रेडिंग को कौशल बिना व्यापार गर्न अनुमति केही मञ्चहरूमा छन्. उदाहरणका लागि, Libertex सबै भन्दा प्रसिद्ध मञ्च हो, तर धेरै अरूलाई छन्. यो प्रयास र सबै काम कसरी यसलाई हेर्न नौसिखिया लागि राम्रो विकल्प छ.
तपाईं सपना छ भने ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 24 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:भुक्तानी अपरेटर धारी Bitcoin इन्कार